Samurai Split i NextGen software slot entsha kuxhotyiswa ekwazi ezintlanu amabini anesihlanu paylines. lo Azisekho idiphozithi Bonus umdlalo iphefumlelwe China kunye Eastern yayo neNkcubeko. Le ukugcina eli slot ngaphaya ibekwe ngokuchasene amadabi, kwilali Chinese. Le mifanekiso mahle okulungileyo kwaye kukho ingoma ezinxulumene isihloko kwisiqalo leyo ihamba abadlali Ukudlala lwabo. Le Ibhonasi game Slots idiphozithi disaccord eliphakathi kwaye umntu ulindele i RTP of 96.63%.
Ufuna ukuzama into entsha? Kutheni Hayi Slots Deposit Bonus!!
Phambi abadlali kulungisa nalwa amadoda amanene, zicetyiswa ukuba alungise imida zabo ukubheja. Abadlali ngokunqakraza kwi elincinane “Coin” icon kwaye Ubungakanani iingqekembe zabo yakhona phakathi 0.01 ukuba 2.50. emva koko, i “Dlala” iqhosha iya kusetyenziswa ekulungelelaniseni ekwazi kulo sesicelo ubhejo ekhethiweyo. kunjalo, Ukuba unqakraza kwi “izicwangciso” ngoko cogwheel kwicala ephezulu ngasekunene, luya kuvula i menu abadlali ithuba lokuba babeke ukubheja okanye ukukhetha ngokuzenzekelayo feature.
Le Ibhonasi game Slots idiphozithi 5 icons ezinxulumene-umxholo kuquka itempile, samurai, ikrele, neqhawe ekhwele kunye igutyana ezincinane. kanti, abadlali lakha amaxabiso asezantsi.
Le icon lasendle ke omkhulu wegolide icon 'Wild' ukuba shintsha zonke ezinye imifanekiso ukwenzela ukwenza combos awinileyo ngaphandle ibhena usichithachithe icon.
Ebudeni nayiphi spin enye J, Q, A ne K Unokuwuqhawula zisuswe ekwazi ukunika abadlali kunye ithuba ngokudala win ezinkulu.
Ngexesha lo msebenzi, samurai ikrele zobugcisa kubona ziya kuza sibe luncedo yaye kunokwenzeka nakweliphi na spin ngenxa ukunqunqa 1 okanye icons ngaphezulu kwesiqingatha. and, kule nkqubo, iya kudala ii icon ezingaphezulu kwaye kuya kwandisa amathuba okuba i winile ezinkulu i.e ukuya ku 32 ngamaxesha yokudlala standard.
Oku owenziwe kokufika 3, 4 okanye 5 imifanekiso siwachithe kuyo nayiphi na imbono kwi kwikhusi apho baya kunikwa 5, 10 okanye ngaphezulu free eluphendula ngokulandelelana; kunjalo, ukuba 5 Uchithachitha ukuba zihlale ukugcina nabo bonke nabo ukuba lahlulwe yi samurai ngoko ke abadlali luckiest anikwa ukuya ku 480 osebenzisa free.
Kukho sesifanekiso bavakalelwa cartoonish ukuba samurai Split ohamba kunye nomxholo kahle kakhulu. Nazi 3 kwemijikelo bonus ezahlukeneyo leyo kakhulu umdla kwakunye kunomvuzo. Kuko konke, lo Slots idiphozithi Bonus umdlalo a elinemali, umdlalo ayidlali nto leyo inika zinexabiso Jackpot ukuya ku 500 imali kwi Ukudlala.